करिश्माले छोरी कवितालाई शिव श्रेष्ठका छोरासँग रोमान्स गराउँदै, थाम्लान् बाबुआमाको बिडो ? – Medianp
करिश्माले छोरी कवितालाई शिव श्रेष्ठका छोरासँग रोमान्स गराउँदै, थाम्लान् बाबुआमाको बिडो ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ०१, २०७५१६:१५0
काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाली फिल्म इन्ड्रस्ट्रिजमा कतिपय कलाकार एवं निर्देशकले आफ्ना सन्तालानलाई फिल्म क्षेत्रमै स्थापित गराउँदै आएका छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन । यसबाट अब नायिका करिश्मा मानन्धर र नायक शिव श्रेष्ठ पनि अछुतो रहेनन् । उनीहरुका सन्तानले पनि अब नेपाली फिल्म इन्ड्रस्ट्रिजमा डेब्यु गर्दै छन् । करिश्माकी छोरी कविता र शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति दुवैले एउटै फिल्मबाट डेब्यु गर्न लागका हुन् ।
शिव श्रेष्ठले निर्माण गर्न लागेको नेपाली चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’बाट डेब्यु गर्न लागेका कविता र शक्तिले पर्दामा एकअर्कासँग रोमान्स गर्ने छन् । कुनै जमानामा निक्कै चर्चा कमाएका यी दुई नायक र नायिकाका सन्तानले बाबु आमाको बिडो कत्तिको थाम्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’मा प्रियंका कार्की, आयुष्मान जोशी, नरेन खड्का, वर्षा राउत, संजोग कोइराला, रेखा फागो, ध्रुव कोइराला, बसुन्धरा भुषाल, शिवानी गरीलगायतको अभिनय रहने छ ।
यो चलचित्रको निर्देशन दिपेश सापकोटाले निर्देशन गर्ने छन् भने चलचित्रमा अर्जुन पोखरेल, बसन्त सापकोटा, सन्तोष रजौरको संगीत रहनेछ । यसको काठमाण्डौ, मकवानपुर, जनकपुर, विरगन्ज, संखुवासभा र देश बाहिर पनि छायांकन गरिने चलचित्र निर्माण युनिटले जनाएको छ ।
चलचित्रमा कविराज गहतरजा, बसन्त श्रेष्ठ, गोविन्द राई, कमल राई लगायतको कोरियोग्राफी रहेनछ । चलचित्रमा रोशन भट्टराइको एक्सन समावेश हुनेछ ।
फोटो भिडियो : बिकाश चित्रकार / मिडिया एनपी
दीपिकासँग विवाहपछि यी तीन कुरा गर्न पाउँदैनन् रणबीर सिंह
मेगन मार्कलको साथी भएको कारण अभिनेत्री प्रियंका बेलायती राजकुमारको आमा बन्न सक्ने
फेरी दोस्रो पटक आमा बन्दै छिन् अभिनेत्री इशा देओल
नेपाली सिने जगतकी चर्चित नायिका साम्राज्ञीे हट अवतारमा (तस्वीरसहित)
‘टोटल धमाल’ ट्रेलरमा देखियो माधुरी दिक्षित र अनिल कपूरदेखि अजय देवगनसम्मको यस्तो रुप